Boeny: miaramila manamboninahitra mpiofana nitsidika ny Lehiben’ny Faritra | Région Boeny
Nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar teto amin’ny Bloc administratif Ampisikina Mahajanga ireo miaramila manamboninahitra mpiofana avy ao amin’ny Ivo-toerana momban’ny fanintaram-pahaizana ho an’ny manamboninahitra avy ao amin’ny tobin’ny tafika Fiadanana, Antananarivo.
Ny Kly Andriamasimanana William Michel, izay avy amin’io Ivotoerana io, no nitarika ireto manamboninahitra ireto, izay mananatanteraka ny dia fiofanana ara-miarala nandritry ny herinandro teto Mahajanga.
Niompana tamin’ny fanazavana mahasika ny anjara asan’ny Faritra Boeny ny famelabelarana nataon’ny Lehiben’ny Faritra Boeny tamin’ity fotoana ity. Anisany nampahafantariny ny momban’ny lalàna 2014-018, mamaritra ny andraikitry ny Lehiben’ny Faritra sy ny fampidiram-bola ao amin’ny rafitra itsinjaram-pahefana isan’mabratongany dia ny Kaominina, ny Faritra ary ny Faritany.
Notsindriny koa ny maha zava-dehibe ny fandriampahalemana izay anisan’ny iankinan’ny fampandrosoana eny anivon’ireo rafitra ireo. Nampahafantarany ankilan’izay ny fankatoavan’ny fitsarana, ny Dinan’ny Boeny Miray dia, izay ampiharina amina distrika dimy ankoatran’i Mahajanga, ato anatin’ny faritra Boeny.